वर्ष दिनको महान चाडमा हामी खुसीका साथ रमाऔं अरुको देखा सिकी नगरौंः कलाकार मगर – रोल्पा समाचार
२०७६ श्रावण २५, शनिबार १४:५४ गते
रोल्पा समाचारदाता on २०७६ श्रावण २५, शनिबार १४:५४ गते
वितगको तुलनामा रोल्पा जिल्लाको कलाकारिता र साहित्य क्षेत्रमा तीव्र विकास हुँदैछ । पछिलो समयमा लोक गीत, आधुनिक गीत, लोक पप, देशभक्ति, पप गीत लगायतका गीत संगितको क्षेत्रमा धेरै कलाकार उत्पादन भएका छन् भने थप नयाँ सर्जकहरुको संख्या समेत बढ्दो क्रममा छ । कलाकारिता क्षेत्रमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्दै आएका रोल्पा नगरपालिका–६ कोङ्ङा कोटगाउँ रोल्पा निबासी इन्द्र पाखे मगर पनि आधुनिक, देशभक्ति, लोक पप, पप गायकमध्ये एक सक्रिय कलाकार हुनुहन्छ । मगरले हिन्दु धर्मलम्बी नारीहरुको महान चाड तीजको अवसरमा तीज गीत बजारमा ल्याउनुभएको छ । बजार आएको तीज गीतको सन्देश, कलाकारिताको अवस्था, आगामी योजना लगायतका विषयमा रोल्पा समाचार राष्ट्रिय साप्ताहिक पत्रिकाको कार्यकारी सम्पादक रेशम बि.क.ले गर्नुभएको कुराकानी प्रस्तुत गरिएको छ ।
धन्यवाद, रोल्पा समाचार साप्ताहिक पत्रिका र परिवार र यस पत्रिकालाई कोमल नयनले अध्ययन गर्नु हुने सम्पूर्ण पाठकहरुमा म इन्द्र ‘पाखे’ मगरको तर्फबाट नमस्कार ।
हजुर कुन कार्यमा व्यवस्त हुनुहुन्छ ?
गीत संगीत कम्पोज लगायत गुनगाउने र आफ्नो हातमुख जोड्ने व्यवसायमा नै म व्यवस्त छु ।
कलाकारिता क्षेत्रलाई कसरी नियाल्दै हुनुहुन्छ ?
कालाकारिता सन्दर्भमा अगाडि बढ्ने अवसर पनि त्यो भित्र ठूलो चुनौति पनि छ । म के भन्छु भने एकातिर पहिलो रहर गीत संगितमा सपना पूरा गरिन्छ । त्यसको साथमा फेरी सांगीतिक करियर अगाडि बढाउने क्रममा आर्थिक चापले छोड निकै पीडा हुन्छु । अनि त्यो सपना त सपना ताप हुन्छ । त्यसकारण गीत संगितमा नसकेर नबुझेर गीत संगतिमा हात हाल्न त्यति सजिलो छैन ।
तीजको अवसरमा बजारमा आएका गीतहरुप्रति हजुरको धारणा के छ ?
सबै गीतहरु समसामयिक हुँदैनन् किन भने नयाँ पुस्ताको माग अनुसार गीत बन्ने हो । लगानी पनि चाहिन्छ । गीत कसरी चलाम भन्ने सोचाइले नै कुनै गीतले न्याय पाइरहेको हुँदैन । मलाई के लाग्छ भने सकेसम्म संस्कृति बचाउने खालको गीत बनाउनु राम्रो होला जस्तो लाग्छ ।
हजुरले हालसम्म बजारमा ल्याएका गीतहरु उल्लेख गरिदिनुहोस्, न ?
हालसम्म ६ ओटा बजारमा मैले ल्याएको छु । जसमा तिमीले नै घृणा ग¥यौं ‘आधुनिक’, नेपाली हो नेपाली हो ‘देशभक्ति’, बाह्र कुने परेको बेलैमा ‘लोकपप’, जोकिङ गरिन्छ ‘पप’, कि ड्यामेज गर्दिन्छ ‘पप’, फेरी आयो तीजको लहर ‘तीज’ गीतहरु बजारमा आएका आएको छ ।
६. हजुरको तीज गीतको सन्दर्भमा बताइदिनुहोस्, न ?
मेरो तीज गीत तीन नजरले सुन्ने खालको बनाएको छु । मलाई हुन त पुराना पुस्ताले संस्कृति बिगा¥यो भन्नलान तर नयाँ पुस्ताले मन पराउने खिचडी मिसिएको छ । नयाँ र पुराना पुस्ताको समिश्रण बनाएको छु ।
कुन उद्धेश्यले गीत बजारमा ल्याउनुभयो ?
मलाई पनि नारीहरुको महान चाड तीज धेरै मन पराउँछु । सानैदेखि गाउँघरमा जहाँ माडल बच्छ त्यहाँ तीजको नाचो हेर्न जान्थेँ र त्यही बास बासी अर्काे दिन घर आउथेँ । त्यो क्षणको साथै मैले पनि नारीप्रति योगदान गर्ने उद्धेश्यले यो गीत बजार ल्याएको हुँ र नारीहरुलाई तीज विशेष शुभकामना व्यक्त गर्दछु ।
गीतप्रति संगित प्रेमीहरुको प्रतिक्रिया कस्तो आउँदै छ त ?
गीतप्रति मेरो स्रोताहरुबाट प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा राम्रो प्रतिक्रिया व्यक्त गर्दै आउनुभएको छ । जुन प्रतिक्रियाले आगामी दिनमा पनि सन्देशमूलक तीज गीतहरु बजारमा ल्याउन उपे्ररित गरेका छ ।
कुन–कुन कुरा समावेश भए गीत थप उत्कृष्ट हुन्थ्यो होला जस्तो लाग्दै छ ?
सबैले गीत मन पराई दिनुभएको छ । जुन गीतको भिडियोमा बीच बजार आमा समूह अध्यक्ष नौली डाँगीको नेतृत्वमा नेतृत्व गरिएको छ । उहाँहरुले बीच बजारमा रु ७ लाख बराबरको महिला समूहको भवन निर्माण गरी सामाजिक क्षेत्रमा योगदान पु¥याउँदै आउनुभएको छ । बीच बजार आमा समूहले यस गीतमा नृत्य गरी महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ । गीत समय सान्दर्भिक भएको हुँदा मलाई त्यो कुरा समावशे भए अझै उत्कृष्ट गीत हुन्थ्यो भन्ने मलाई महशुस भएको छैन । तर आगामी दिनमा शुभचिन्तकहरुको सल्लाह सुझावलाई आत्म सात गर्दै अगाडि बढ्ने छु ।
गीतको सन्देश के हो ?
गीतको सन्देश जस्तो परिस्थिति भएतापनि वर्ष दिनकोे माहान चाडमा हामी खुसी रमाऔं अरुको देखा सिकी नगरौं भन्ने नै छ ।
गीतको बजारीकरणको अवस्था कस्तो छ ?
गीतको बजारको अवस्था प्रविधिले खस्कायो नै जति बजारमा विक्रि हुनुपर्ने हो । त्यस्तो भएको छैन । कलाकारलाई बचाउनु र उठाउनु छ भने बजारदेखि माडियासम्म हामी सबैको सक्रिय बन्न जरुरी म देख्दछु । विगतमा गीत राम्रो वा नराम्रो भएपनि कयौं गीत संगित प्रेमीहरुलाई विक्रिबाट लगानी उठ्यो तर प्रविधिको विकाससँगै अहिले त्यस्तो अवस्था छैन । बढ्दो प्रविधिको कारण गीत संगितको बजारिकरणको अवस्था पहिलेको तुलनामा खस्किदो अवस्था छ । अनि मात्र छिटो नयाँ–नयाँ संगितिक स्वाद आम गीत संगित प्रेमीहरुले पाउन सक्नु हुन्छ भन्न चाहन्छु ।
गीत बजारसम्म ल्याउन कति खर्च भयो ?
यो गीत बजारसम्म ल्याउन हामीलाई खान बस्न, यातायात खर्च, विज्ञापन बजाउँदा, भिडियो लगायत विभिन्न खर्च गरी रु ५० देखि ६० हजारभन्दा बढि रकम खर्च भएको छ ।
आम्दानीको अवस्था के छ ?
आम्दानीको अवस्था त अरुलाई ठगेर काम गर्नेहरुलाई त होला त्यो आफ्नो ठाउँमा रह्यो तर हामी स्वच्छ तरिकाले काम गर्नेहरुलाई आम्दानी छैन भन्दा फरक नपर्ला । हामीलाई दुई÷चार पैसा जुटाउँदै गीत संगित प्रेमीहरुलाई समय सान्दर्भिक नयाँ गीत संगित दिँदै आएका छौं ।
कलाकारिता क्षेत्रको चुनौतिहरु के–के हुन् ?
कलाकारिता क्षेत्रमा जुनकीरी जस्तै दुई किसिमका रहेका छन् । जसमा कलाकारिता नबुझेर गीत सगीत नसिकेर र कला छ तर आर्थिक समस्या प्रमुख चुनौतिहरु हुन् भने अर्काे बजार व्यवस्थापन पनि चुनौतिको रुपमा रहेका छ ।
समाजको विकृति विसंगतिलाई कलाकारिता क्षेत्रबाट कसरी न्यूनिकरण गर्न सकिन्छ ?
समाजको विकृति विसंगितहरुलाई कलाकारिताकै माध्यमबाट नै सन्देशमूलक गीत संगितहरु गाएर हटाउन सकिन्छ । त्यसैले सन्देशमूलक गीत संगितकै माध्यमबाट नै समाज परिवर्तन गर्न सकिन्छ ।
अहिले कलकारिता क्षेत्रबाट नै जीवन निर्वाह गर्न सकिने अवस्था छ कि छैन ?
बढ्दो प्रविधिको विकासले कलाकारिता क्षेत्रबाट नै जीवन निर्वाह गर्न सकिने अवस्था छैन । कलाकारिता क्षेत्रमा पहिलो कुुरा प्रयाप्त लगानी र बजारिकरणको उपयुक्त व्यवस्थापनमा सफल भएकाहरुलाई त केही आम्दानी भएको छ तर आर्थिक र बजारिकरणको व्यवस्थापन उचित नहुने कलाकारहरुलाई यस क्षेत्रबाट जीवन निर्वाहको सम्भावना छैन । प्रसिद्ध कलाकारहरुलाई त जीवन निर्वाहको वातावरण छ भने प्रसिद्ध नभएकाहरुलाई त यस क्षेत्रबाट जीवन निर्वाहको वातावरण छैन ।
हजुरको आगामी योजना बताइदिनुहोस्, न ?
मेरो आगामी योजना भनेको गीत संगित बजारमा ल्याउने हो । सम्पूर्ण गीत संगित प्रेमिहरुले सुनेर मलाई साथ दिनु हुनेछ भन्ने विश्वास गरेको छु । त्यस्तो ठूलो सपना पनि छैन । म गीत संगितबाट नै समाजलाई योगदान पु¥याउनु हो । म त्यसैमा खुसी छु ।
समाज परिवर्तनमा गीत संगितको भूमिका बताइदिनुहोस्, न ?
हो समाज परिवर्तनमा गीत संगितको महत्वपूर्ण भूमिका छ । कलाकारहरुले लोकप्रियाभन्दा पनि समाज परिवर्तन सम्बन्धि गीत संगितको सिर्जनामा ध्यान पु¥याउन आवश्यक छ । त्यसैले समाज परिवर्तनको निम्ति कलाकारहरुले देशभक्ति, जनचेतनामूलक गीत संगितहरुको सिर्जना गर्नुपर्ने अहिले आवश्यकता हो ।
कलाकारहरुले गीत संगितमा के–कस्ता कुरामा ध्यान दिनु पर्दछ ?
कलाकारहरुले विकृति विसंगितहरु पmैलिने गाउनुभएन, गीत सिर्जनाको समयमा शब्द चयन, भिडियो निर्माण, ड्रेसको छनोट लगायतका कुराहरुमा ध्यान दिन आवश्यक छ ।
कलाकारिता क्षेत्रको विकास प्रर्वद्धनका लागि तीन तहका सरकारले अझै के गर्न आवश्यक छ ?
कालाकारिता विकासको लागि तीन तहका सरकारका प्रमुखहरुले कलाकारको तीनतह त्यही अनुसारको आवश्यक परीपूर्ति गर्ने हो भने कलाकारिता क्षेत्रको विकास हुन्छ । त्यस्को साथै देश विकास हुन्छ तर हाम्रो देशमा केन्द्रदेखि जिल्लासम्म कलाकारहरुलाई प्रयोग गरी फ्याक गर्दछन् । कार्यक्रममा नामसम्म चिनाउन हिच्किचाउँछन् अनि कलाकारिता क्षेत्रको विकास हुन्छ । त्यसैले तीह तहका सरकार प्रमुखहरुले कलाकारिता क्षेत्रको विकासको निम्ति विशेष ध्यान पु¥याउन जरुरी छ ।
गीत संगित प्रेमिहरुलाई के भन्नु हुन्छ ?
म गीत संगित प्रेमीहरु पनि भन्दैन उहाँहरु त मेरो भगवान नै थान्दछु । उहाँलाई स्वस्थ जीवन बिताउनु होस् अनी गीत संगितहरु सुन्नुहोस् । म आगामी दिनमा हजुरहरुको सामु नयाँ–नयाँ गीत ल्याउने बाचा समेत व्यक्त गर्दछु ।
म तपाई हजुरकै छोरो चेलो रोल्पाली हुँ । म हरपल गीत संगित प्रेमिहरुलाई सम्मान गर्दछु । मेरो रोल्पा छ र त म छु । नेपाल छ र त हामी छौं । हजुरहरुले गीत संगित सुन्नु होला । कलाकारिता क्षेत्रमा उर्जाशिल कलाकार इन्द्र ‘पाखे’ मगरलाई नभुल्नु होला भन्दै अनुरोध गर्दछु । यस हाम्रो लोक प्रिय पत्रिका मार्फत सम्पूर्ण पाठक वर्गहरुमा मेरो गीत लगायत कलाकारिता क्षेत्रको विषयवस्तुमा मेरो विचार राख्ने मौका दिनुभएकोमा प्रकाशक एवं प्रकाशक मानसिंह विश्वकर्मा लगायत सम्पूर्ण परिवार टिमलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु । आगमी दिनमा पनि यसरी नै विचार राख्ने मौकाको अपेक्षा गर्दै लोक प्रिया यस पत्रिकाको उत्तर–उत्तर प्रगतिको कामना समेत व्यक्त गर्दछु ।